mairie-antananarivo – Ben’ny Tanànan’Antananarivo tany New-York sy Washington – CUA
Ben’ny Tanànan’Antananarivo tany New-York sy Washington – CUA
administrateur 30 jolay 2018 Commentaires fermés
Fahombiazana ny dian’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana tany New-York Etazonia, niatrika ny fivoriamben’ny CGLU: Collectivités et Gouvernement Local Unis, na ny fivondronamben’ireo governemantam-paritra sy ireo tanàn-dehibe eto amin’izao tontolo izao, nandinihana ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe sy ny Kaominina ary ireo governemantam-paritra. Nanohana ny dian’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo tamin’izao diany izao ny fikambanana Allemand GIZ.
Tafaverina an-tanindrazana omaly ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, nambarany fa nahazo sitraka tamin’ireo mpivory i Madagasikara nandritra izany, indrindra ny tanànan’Antananarivo tamin’ny fandraisam-pitenenana voalohany nataony tany, satria azo lazaina ho maro ireo ezaka fampandrosoana ny tanàna nataon’ireo Kaominina solontenan’i Madagasikara tany any an-toerana dia ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, Mahajanga ary Fianarantsoa.
Anisan’ireo ezaka natao hoy izy ny fanombohana fampidiran-ketra amin’ny finday na ny mobile banking, ny fanatsarana hafa natao eo amin’ny fampidiran-ketra izay koa, ny fandraisan’anjaran’ny Kaominina amin’ny fampandrosoana maharitra, ny fanaovana fambolena an-tanàn-dehibe na agriculture urbaine, ny ezaka fampandrosoana ny tanàna amin’ny ankapobeny ary ny fanomezana sakafo ny mponina sahirana ara-pivelomana.
Fantatra fa amin’ny volana oktobra ho avy izao dia ho tonga aty Madagasikara ny avy amin’ny CGLU eran-tany, hijery avy hatrany ny tetikasa momba ny fampandrosoana hiarahana amin’ireo kaominina aty Madagasikara, anisan’izany Antananarivo. Ankoatra izany, tany Washington koa ny ben’ny tanànan’Antananarivo, nisy tany ny fihaonany tamin’ireo Malagasy monina any Etazonia tamin’izany, nivoitra tamin’ny fihaonana fa ilaina ny hisian’ny tena firaisankinan’ny Malagasy, na ny any ivelany izany, indrindra ny samy eto an-toerana ho fampandrosoam-pirenena, sy ho fampandrosoana ny tanàna.